Carl Henry Consultancy - Soisa
Carl Henry Consultancy - Fampidirana
Taorian'ny 40 taona maromaro sy 39 samihafa dia nandresy ny ankamaroan'ny olana momba ny raharaham-barotra aho ary nianatra momba ny lafiny rehetra amin'ny raharaham-barotra na any Angletera na manerana izao tontolo izao.
Hitako fa afaka mampisy lanjany amin'ny fomba mahitsy kokoa amin'ny alàlan'ny famahana ny olana mitarika ahy amin'ny toe-javatra maro 'mivadika' sy ny famonjena.
Iray fepetra tsy miovaova, satria i 1980 dia fananana fananan-tany - raha ny tranona no laharam-pahamehana indrindra no nahavitako ny fifanakalozan-drivotra tany amin'ny sekta rehetra, anisan'izany ny karazan'akanjo maimaim-poana, fialam-boly, birao, trano ary varotra. Tahaka izany ihany dia tsy maintsy notazomiko avokoa ny fifanakalozana ara-barotra, ny fampandrosoana, ny fanavaozana, ny fitantanana ary ny fampiasam-bola.
Nataoko koa ny iraka nataoko mba hijanonana mialoha ireo teknolojia farany indrindra mba hahafahako manomboka ny tranonkalan'ny eCommerce voalohany ao amin'ny 1998.- hatramin'izao ny orinasako sy izaho dia nanamboatra tsara ny habaka 5,000 amin'ny karazany rehetra, fa raha ny tena izy dia efa very aho izao !
MSA - 41A lalana an'ny Tanora